Lozam-pifamoivoizana – Lalana digue: 25 naratra, nosokirina vao tafavoaka ny mpamily roa lahy | NewsMada
Mafy ny fifandonana. Samy potika ny lohan’ireto fiara fitateram-bahoaka roa, taxi-be 194 sy zotra mpankeny Ambohitrimanjaka. Goavana ihany koa ny vokany satria 25 be izao ny naratra. Nisy aza ny voa mafy. Anisan’izany ireo mpamily roa lahy izay samy nosokirina vao tafavoaka tao anatin’ireo fiara.
Mpandeha miisa 25 indray naratra mafy! Io ny vokatry ny lozam-pifamoivoizana nitranga teny amin’ny lalana Digue Andohatapenaka akaikin’ny kianja Maki, omaly hariva tamin’ny 4 ora sy 30 mn. Araka ny fanazavan’ny polisy tonga nanao fanadihadiana teny amin’ny toerana nitrangan’ny loza, taxi-be zotra 194 sy taxi-be zotra mampitohy an’Ambohitrimanjaka ireto nifandona ireto. Mafy ny fifandonana satria nahitana fahasimbana ary potika tanteraka ny lohan’ireo taxi-be roa nifandona. Miisa 25 ireo mpandeha naratra mafy tao anatin’ireo taxi-be ireo vokatry ny fifandonana. Voa mafy ary atahorana mihitsy aza ny ain’ilay mpamilin’ilay taxi-be zotra 194 satria nosokirina tao anaty korontambin’ny fiara izy. Naharitra fotoana maromaro ny nisokirana azy tao, raha ny fanazavana voaray teny an-toerana. Tsy mbola fantatra mazava ny antony nahatonga ny loza fa mbola ao anatin’ny fanadihadiana ny polisy ka aorian’izay ny hamantarana ny marina rehetra momba ity loza ity. Ny famonjena ny ain’ireo naratra no natao haingana taorian’ny fifandonan’ireto taxi-be ireto.
Lehilahy iray hafa maty voahosin’ny fiara…
Nentina haingana namonjy ny hopitaly HJRA ireo naratra. Na eo aza anefa izany, tsy nisy kosa ny aina nafoy na teo aza ny voina nahazo ireo mpandeha. Niteraka fitohanana naharitratra ho an’ireo fiara hihazo an’Ambohibao sy miakatra mihazo ny Renivohitra ity loza ity.
Fa ankoatra ity lozam-piarakodia ity, lehilahy iray hafa koa hita faty nodonin’ny fiara teny Ambodimita, omaly maraina ihany. Nohosen’ny fiara ilay niharam-boina ary tsy misy amantarana azy intsony ny endriny noho ny ratra nahazo azy. Lasa nitsoaka kosa ilay fiara nahavanon-doza fa ilay razana no naterina eny amin’ny tranom-patin’ny hopitaly HJRA.
Tsy vao izao fa matetika ahitana lozam-pifamoivoizana hatrany iny Digue Andohatapenaka iny. Tandrevaka hatrany ny mahatonga ny loza, indrindra ho an’ireo mpamily taxi-be. Manginy fotsiny ny fifanenjehana eo amin’ny samy taxi-be. Ny mpandeha hatrany no mitondra faisana, manginy fotsiny ny tsy fanajana ny lalàna mifehy ny fifamoivoizana.